Skena, Ziva uye Dudzira Chinyorwa neMavaraGrabber, Yemahara kune Yakatemwa Nguva | IPhone nhau
Skena, ziva uye ushandure zvinyorwa neMagwaroGrabber, yemahara kwenguva pfupi
Kunyangwe kubva tichiri vadiki vabereki vedu vakagara vachitiudza kuti zvakakosha kuziva Chirungu, pamusoro pemakore uye zvichienderana nebasa ratakapedza kana basa ratakadzidza, Chirungu chingangodaro chaive sarudzo kana chisungo. Asi havazi vese vakave kana vane nguva kana mari yekudzidza mimwe mitauro. Neraki, tinogona kushandisa zvinoshandiswa zvinotibvumidza kushandura zvakanyorwa mune mimwe mitauro. TextGrabber ndechimwe chazvo chinotipa matatu mabasa mune rimwe: inoongorora, inoziva zvinyorwa uye inozoishandurira mumitauro inodarika zana.
Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi kwenguva yakati rebei iyo inongotibvumidza isu kuongorora uye kuziva iwo mavara. Kana tichida Kuti tishandise iyo dudziro, isu tinofanirwa kuenda kune iye anobhadhara uye tinobhadhara 3,99 euros. Mukana chete watinowana kana isu tisingade kuenda kubudikidza nekutenga kuti tishandure zvinyorwa, ndezvekuti isu tinogona kuteedzera nekunamatira mumushanduri weGoogle uye nekudaro tinochengeta maeuro e3,99 ebasa iri.
Kuzivikanwa kwemavara uye QR kodhi mumitauro inodarika makumi matanhatu inosanganisira Spanish, Chirungu, ChiGerman, Chiitaliya, ChiFrench, ChiPutukezi, ChiRussian, ChiChinese, ChiJapanese ...
Iyo inokwanisa kududzira zvinyorwa kubva kune inopfuura zana mitauro, iyo inoda zvachose internet internet.
Kugona kutevedzera nekunamatira iwo mashoma uye akashandurwa mavara kune mamwe maapplication.
Tinogona kushambadzira iyo dudziro paFacebook, Twitter uye Evernote kubva kuchishandiswa
Tsvaga zvakadudzirwa pane internet.
Sevha mameseji mifananidzo ku iPhone
Ese akatorwa mavara akachengetwa munhoroondo dhairekodhi, nhoroondo inogona kuvhurwa nekugadziriswa chero nguva zvinoenderana nezvatinoda.
Verenga magwaro emahara nekuda kweIzwi Pamusoro.
Saizi yefonti inogona kuve yakasiyanasiyana kune vanhu vane matambudziko ekuona.
TextGrabber - Kamera Mushandurivakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Skena, ziva uye ushandure zvinyorwa neMagwaroGrabber, yemahara kwenguva pfupi
iOS 10.3 ichave iine rima modha